Fanohanana, avy amin'ny Apple, misy any Espana izao | Vaovao IPhone
Fanohanana, avy amin'ny Apple, misy any Espana izao
Apple dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Fanohanana tamin'ny Novambra lasa teo. Serivisy fanampiana vaovao ho an'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampiharana iOS izay amaliana ny fisalasalana na ny fitarainan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny iPhone na iPad. Tamin'ny voalohany, tany Netherlands ihany no natomboka ilay fampiharana. Saingy, ny vaovao ankehitriny dia hoe efa azo alaina ao Espaniola maimaimpoana maimaimpoana izany. Araka ny noresahantsika volana vitsivitsy lasa izay, ao amin'ny Apple Support ny mpampiasa dia manana rohy mahasoa amin'ny lahatsoratra fanampiana sy torolàlana samihafa. Omena ihany koa ny fidirana amin'ireo serivisy toa ny AppleCare.
Misy amin'ny Espaniôla ny fampiharana, fa ny fahafantarana ny serivisy teknika an'ny Apple dia manampy amin'ny fampiasana ilay sehatra amin'ny fomba mora lavitra kokoa. Ny nataon'ny orinasa notarihin'i Tim Cook dia nanamboatra ny tranokalan'ny mpanohana azy hamindra azy amin'ny fitaovana finday. Apple Support dia azo alaina ao amin'ny App Store maimaimpoana sy amin'ny Espaniôla izao. Apple dia manome toky amin'ny famaritana ny rindranasa Fanohanana vaovao fa afaka mifampiresaka eo noho eo amin'ny manam-pahaizana amin'ny alàlan'ny telefaona, chat na mailaka ny mpampiasa mba hanampiana azy ireo hamaly ny fanontaniany rehetra. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ity fampiharana vaovao ity dia azo atao ihany koa ny manomana antso fanampiana, satria rehefa afaka miteny milamina ny mpampiasa, na mangataka fanamboarana ao amin'ny Apple Store akaiky indrindra ny misy anay aza. Ny fampiharana dia tonga hanamaivanana ny iray amin'ireo tsy fahampiana lehibe nananan'i Apple tamin'ny serivisy fanampiana azy. Ireo fantsom-panohanana samihafa natolotry ny orinasa ho an'ny mpanjifany dia tsy nampiditra ny kinova telematika tamin'ny alàlan'ny fampiharana, fa manomboka izao dia voavaha ny olana.
Ho fanampin'ity fampiharana vaovao ity, ireo mpampiasa fitaovana Apple dia afaka mifandray amin'ny orinasa mivantana amin'ny tranokalany na amin'ny alàlan'ny kaonty Twitter ofisialy natokana hamaly ireo fanontaniana ara-teknika avy amin'ny olona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Fanohanana, avy amin'ny Apple, misy any Espana izao
tvOS 10.2 beta 1 dia azo alaina ho an'ny mpamorona ankehitriny
Ny tranokalan'i Apple dia manomboka mandray ny endritsoratra San Francisco